चिनियाँ मिडिया भन्छन्, यी हुन् भारतले गरेका ‘सात पाप’ (भाइरल भिडियो)
काठमाडौं, भदौ १ । चीन–भारत सीमा विवादलाई लिएर चिनियाँ सरकारी सन्चारमाध्यले ‘अनलाइन मिडिया शो’मार्फत भारतले गरेको ‘सात पाप’ भन्दै मजाक उडाएको छ ।
चीनको ‘खुर्सानी महोत्सव’मा सु बने ‘खुर्सानी राजा’
हुनान, साउन ३१ । चीनमा प्रत्येक वर्ष मनाइने ‘खुर्सानी महोत्सव’मा अत्यन्तै पिरो मानिने रातो खुर्सानि छोटो समयमा धेरै खाएर एकजना युवक ‘खुर्सानी राजा’ (चिल्लि किंग) बनेका छन् ।
सामान्य परिवारमा रु ६१ अर्ब बराबरको बिद्युत बिल ! ‘घरको लाइनसमेत काटियो’
झारखण्ड, साउन ३० । भारतको एक सामान्य परिवारलाई विद्युत कार्यालयले ३८ बिलियन भारु (करिव ६१ अर्ब रुपैयाँ)को बिद्युत बिल दिएर तिर्न नसक्ने भन्दै घरमा बिद्युतको लाइन काटिदिएको छ ।
चीन, साउन २९ । चिनियाँ कम्पनीले बोल्ने, हाँस्ने र गीत गाउन सक्ने यौन गुडिया (सेक्स डल) निर्माण गरेका छन् ।
जहाँ जान्छन् अमेरिकी राष्ट्रपति उतै लगिन्छ यो ब्रिफकेस, के हुन्छ यो ब्रिफकेसभित्र ?
वासिंटन, साउन २१ । अमेरिकी राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसबाट बाहिर निस्कनासाथ उनको भ्रमण दलमा रहने टोलीका एक सदस्यले छालाको ब्रिफकेस बोकेर हिँडेको दृष्य विभिन्न तस्वीर तथा भिडियोमा देखिन्छ । तर त्यो ब्रिफकेस किन बोकिन्छ भन्नेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।
कार चोरी गर्न गधाको प्रयोग !
जोहानेसबर्ग, साउन १९ । चोरहरुले चोरीका लागि अनौठो विधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा कार चोरी गर्ने गिरोहले गधा प्रयोग गरेर कार लैजाने गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
एउटै फोटोले विश्व मै चर्चित फोटोग्राफरको जीवन त्यही फोटोका कारण यसरी भयो बर्बाद
लन्डन, साउन ९ । इन्टरनेटमा कालो बाँदरको एउटा सेल्फी खुब चर्चित छ । धेरैले यो तस्वीर देखेको हुनु पर्दछ । यही तस्वीरका कारण विश्वमा चर्चित भएका फोटोग्राफर कसरी सोही तस्वीरका कारण बर्बाद भए भन्नेबारे चाहीँ कमैलाई जानकारी हुन सक्छ ।
पाँच महिनाको बाच्छोसँग ७४ वर्षीया बृद्धाले गरिन् विवाह (फोटो फिचर)
कम्बोडिया, साउन ८ । कम्बोडियाकी एक ७४ वर्षीया बृद्धाले पाँच महिनाको बाच्छोसँग विवाह गरेकी छन् ।
साउदीमा मिनिस्कर्ट लगाएर ‘सनसनी’ मच्चाउने महिला रिहा
रियाद, साउन ५ । साउदी अरबको ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलमा ‘मिनिस्कर्ट’ लगाएर सनसनी मच्चाउने एक महिलालाई साउदी प्रहरीले पक्राउ गरेर सामान्य सोधपुछपछि रिहा गरिएको छ ।